“यहाँको घरमा छोरी-चेली छैनन् ?” फेसबुक प्रयोगकर्तालाई प्रियंका कार्कीको पत्र — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » मनोरञ्जन → “यहाँको घरमा छोरी-चेली छैनन् ?” फेसबुक प्रयोगकर्तालाई प्रियंका कार्कीको पत्र
“यहाँको घरमा छोरी-चेली छैनन् ?” फेसबुक प्रयोगकर्तालाई प्रियंका कार्कीको पत्र
April 18, 2016४२५ पटक
प्रियंका कार्कीले आफ्नो फेसबुकको स्टाटस मार्फत सबै नारी जातिलाई आफ्नो आमा दिदी बहिनीलाई जस्तै व्यवहार गर्न आग्रह गरेकी छिन् । उनले यो कुरा आफ्नो फेसबुक पेजमा केही प्रयोगकर्ताद्धारा प्रयोग गरिएको छाडा तथा अश्लिल कमेन्टको बिरुद्धमा गरेकी हुन् ।
यहाँहरुको घरमा छोरी-चेली छैनन? एक पटक सोच्नुस त, तपाइको घरको दिदी-बहिनी, आमा, भाउजू, छोरी हरु माथी येस्तो शब्द कसैले प्रयोग गर्दा, तपाइलाइ कस्तो महसुस हुन्थ्यो?? ठिक त्येस्तै महसुस हुदो होला नि मेरा बुबा, आमा, भाइ र अन्य परिवारका सदस्यहरुलाइ।
उनले आफ्नो फेसुबक पेजमा निकै भाबुक हुदै सम्पूर्ण नेपाली कलाकारलाई सम्मान गर्न समेत आग्रह गरेकी छिन् ।
हामी कलाकार दिन रात मेहेनत गर्छौ। घरी फिलिम शुटिङ, घरी कार्यक्रम। दशै, तिहार, चाड पर्व केही न सोची यहाँहरुलाइ मनोरंजन दिन घरी कतार, घरी मलेसिया त घरी अस्ट्रेलिया पुग्छौ। के को लागिरु येहि आलोचना खप्नको लागिरु कति चित्त दुख्छ होला सोच्नुस।
हेर्नुस् उनको फेसबुक स्टाटस
प्रस्तुती : अर्जुन बि.क.